Daily Reflection | Page 12 | Radio Veritas Asia
vQr](6)- rkud]eHQ qmO]xdRty&mY
အဂဲးဘဲၫယီၩယလီၩဘၪနၥံၪယီၩ နၥံၪအဆၧတီၩဆၧလီၩ့ အ့ၪလအၪနဲၪ့ဘၪၦကွ့ၭလံၬ
ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪအဆၧတီၩဆၧလီၩ့တၭ နၥံၪလ့ၩနုၬ ဘၪလၧမူၭခိၪအဘၩ့အမုး
အဖၧၩ့အ့ၬ. ဆၧၥီၪ့လိၪဘၪဆဲၫ့ဆၧၥၭထၪ့အဂဲး. နၥံၪနါဂၧၫ့ယူၭလၧၦမွံၩၦၡါစံၭဝ့ၫဒၪ
Updated date: Fri, 03/06/2020 - 10:26
အဂဲးဘဲၫယီၩယလီၩဘၪနၥံၪယီၩ နၥံၪအဆၧတီၩဆၧလီၩ့ အ့ၪလအၪနဲၪ့ဘၪၦကွ့ၭလံၬ ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪအဆၧတီၩဆၧလီၩ့တၭ နၥံၪလ့ၩနုၬ ဘၪလၧမူၭခိၪအဘၩ့ အမုးအဖၧၩ့အ့ၬ.နၥံၪနါဂၧၫ့ယူၭလၧၦမွံၩၦၡါစံၭဝ့ၫဒၪ ထီးမၩၥံၫၦ ၡၩလဂ့ၩး ထီးဒၪၦလၧအမၩၥံၫဝ့ၫလဂၩဂၩနီၪဂ့ၩဘၪဆၧစ့ၩရၫ့ခွးလီၫ.- အ့...
Updated date: Fri, 03/06/2020 - 07:25
အၪ့ကံၩ့ အၪ့ဎၬ ဒိၪထိၬ
အၪ့ကံၩ့ဆၧဆံၭ ဆၧမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလီၫ. အၪ့ဎၬ ဆၧဆံၭနၥံၪမိဒၪန့ဆၧလီၫ. ဒိၪထိၬဆၧဆံၭ ဆၧမိဝဲထၪ့လၧနၥံၪအဂးလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩကယဲၦလၧအ အၪ့ကံၩ့ဆၧနီၪမွဲအန့ဘၪဝ့ၫကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ. ၦလၧအအၪ့ ဎၬဆၧနီၪ,မွဲအဒၪန့ဘၪဝ့ၫလီၫ. ဆၧမိဝဲထၪ့န့ ၦလၧအဒိၪထိၬဆၧနီၪလီၫ.- ၦၡၩအီၪလၧနၥံၪအကျၩ လၧအဖိၪခွၫအ့ၪ...
Updated date: Thu, 03/05/2020 - 09:33
vQr](5)- rkud]eHQ qmO]xdRty&mY
အၪ့ကံၩ့ဆၧဆံၭ ဆၧမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလီၫ. အၪ့ဎၬဆၧဆံၭ နၥံၪမိဒၪန့ဆၧလီၫ. ဒိၪထိၬဆၧဆံၭ
ဆၧမိဝဲထၪ့လၧနၥံၪအဂးလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ကယဲၦလၧအ အၪ့ကံၩ့ဆၧနီၪမွဲအန့ဘၪဝ့ၫ
ကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ. ၦလၧအအၪ့ ဎၬဆၧနီၪ မွဲအဒၪန့ဘၪဝ့ၫလီၫ. ဆၧမိဝဲထၪ့န့ ၦလၧအဒိၪထိၬဆၧနီၪလီၫ.
ၦခမျၧးအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ ကထံၬကထူၬတၭ အဝ့ၫ ဒၪစံၭဝ့ၫ ၦလဆိၩယီၩ မွဲအဘၪဆိၪအၧၩ့လီၫ. အၪ့ ဎၬဝ့ၫလၧဆၧလၩ့လၭတၭ အ့ၪလမွဲဘၪစယိနၫအဆၧလၩ့လၭနီၪဆၧဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫအဆၧလၩ့လၭအ့ၬ.- အ ဂဲးဘဲၫယီၩ ဘဲၫစယိနၫကဲၪဆၧလၩ့လၭလၧၦနံနဝ့ၫဖိၪ အမ့ၬယၫအၥိၭနီၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩမိကဲၪထၪ့ ဆၧလ...
Updated date: Wed, 03/04/2020 - 12:01
vQr](4)- rkud]eHQ qmO]xdRty&mY
အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ ၦလဆိၩယီၩ မွဲအဘၪဆိၪအၧၩ့လီၫ. အၪ့ဎၬဝ့ၫလၧဆၧလၩ့လၭတၭ အ့ၪလမွဲဘၪ
စယိနၫအဆၧလၩ့လၭနီၪ,ဆၧဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ အဆၧလၩ့လၭအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ
ဘဲၫစယိနၫကဲၪဆၧလၩ့လၭလၧၦနံနဝ့ၫဖိၪ အမ့ၬယၫအၥိၭနီၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩမိကဲၪ
Updated date: Wed, 03/04/2020 - 09:10
vQr](3)- rkud]eHQ qmO]xdRty&mY
ထီးနအ့ၪဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪ ထီးစံၭဂီၩ့စံၭထဲၩ့ စံၭဂီၩ့စံၭထဲၩ့ပျီၩပျီၩ ဘဲၫၦဆၨၩလဖၪအၥိၭ
နီၪလဂ့ၩ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့လၧအချဲၩ့ဆၧအၪအကၠီၩ့တၭ ဆၧမိခိၭနၪဝ့ၫလီၫ.
အခိးမွဲဘဲၫနီၪတၭ ထီးမၩဒီၩ့အဝ့ၫၥံၪလဂ့ၩ.အဂဲးဘဲၫယီၩဆၧလၧနၥံၪ န့ဘၪဝ့ၫအလးအီၪ
Updated date: Tue, 03/03/2020 - 11:32
ထီးနအ့ၪဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪထီးစံၭဂီၩ့စံၭထဲၩ့စံၭ ဂီၩ့စံၭထဲၩ့ပျီၩပျီၩ ဘဲၫၦဆၨၩလဖၪအၥိၭနီၪလဂ့ၩ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့ လၧအချဲၩ့ဆၧအၪအကၠီၩ့တၭဆၧမိခိၭနၪဝ့ၫလီၫ.- အခိးမွဲဘဲၫနီၪတၭ ထီးမၩဒီၩ့အဝ့ၫၥံၪလဂ့ၩး အဂဲးဘဲၫယီၩဆၧလၧနၥံၪ န့ဘၪဝ့ၫအလးအီၪလဖၪနီၪ နၥ...
Updated date: Tue, 03/03/2020 - 08:13
vQr](2)- rkud]eHQ qmO]xdRty&mY
ထီးၦၡၩအဖိၪခွၫ မိဂဲၫလၩ့ဝ့ၫလၧ အလၩအဖၩ့ဒဲအၥီၫ့ဆံၫ့ဎံၪထီးအလူၬနီၪ ထီးနီၪလဖၧၫ့ မိဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧအလးဆီၩ့ဆီ ကယးကဖးအဖၫ့ခိၪတၭ ၦကိၭဆၨၩဒ့ၭ မိဘၪအီၪကီၪ့ လၧအမ့ၬယၫလီၫ. အဝ့ၫဒၪမိအၪ့နၩ့ဖၭအဆၧၫ့ ဘဲၫၦယူၬၥိၪလဂၩ အၪ့နၩ့ဖၭၥိၪဒဲဘ့ၪအဆၧၫ့အၥိၭနီၪလီၫ. အဝ့ၫဒၪမိ အီၪက့ၪၥိၪလဖၪနီ...
Updated date: Mon, 03/02/2020 - 10:57
ထီးၦၡၩအဖိၪခွၫမိဂဲၫလၩ့ဝ့ၫလၧအလၩအဖၩ့ ဒဲအၥီၫ့ ဎဆံၫ့ဎံၪၭ ထီးအလူၬနီၪး ထီးနီၪလဖၧၫ့မိဆၧၫ့ နၩ့ဝ့ၫလၧအလးဆီၩ့ဆီ ကယးကဖးအဖၫ့ခိၪတၭၦကိၭဆၨၩဒ့ၭ မိဘၪအီၪကီၪ့ လၧအမ့ၬယၫလီၫ. အဝ့ၫဒၪမိအၪ့နၩ့ဖၭအဆၧၫ့ ဘဲၫၦယူၬၥိၪလဂၩ အၪ့နၩ့ဖၭၥိၪဒဲဘ့ၪအဆၧၫ့အၥိၭနီၪလီၫ.-
Updated date: Mon, 03/02/2020 - 08:25